Zimbabwe's massive cash shortages, a thing of the past? | Zimbabwe News Now
Home » Zimbabwe's massive cash shortages, a thing of the past?
Zimbabwe's massive cash shortages, a thing of the past?
Published by admin1 on Tue, 12/05/2017 - 13:57
JOHANNESBURG: Zimbabwe has grappled with cash shortages since April 2016, largely due to externalisation and the hoarding of money. Reports suggest that roughly US$3 billion was externalised to Mauritius, the Far East and Botswana between the period of 2015 to 2017.
In a massive bid to stabilise a fragile Zimbabwean economy, newly inaugurated Zimbabwean President, Emmerson Mnangagwa last week named a new cabinet, which comprises of both new and old political faces.